သတင်း - ကား၏ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း၏ ရှေ့-တင်နှင့် နောက်-တင်ခြင်းကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။
မော်တော်ကားကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းသည် ချီးမွမ်းအခံရဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံးသော အပလီကေးရှင်းအခြေအနေများပါရှိသော နည်းပညာထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။အားသွင်းကြိုးကို မကြာခဏ ပလပ်ထိုးခြင်းနှင့် ပလပ်ဖြုတ်ရန် မလိုအပ်ပါ။၎င်းသည် မောင်းနှင်မှုဘေးကင်းရေးနှင့် ကားပိုင်ရှင်များ၏ ဘဝအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးသည့် စမတ်နည်းပညာထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် ကားအတွင်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်းအတွေ့အကြုံကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
ကား၏ရှေ့နှင့်နောက် ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းအကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
ကားကို ကြိုးမဲ့အားသွင်းနည်းများ- ရှေ့-တင်ခြင်းနှင့် နောက်ပြန်တင်ခြင်း။
လက်ရှိတွင်၊ ယာဉ်များတွင် ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိပါသည်။
စကားတစ်ခွန်း၊front-loadingဆိုလိုတာက ကားမှာ စက်ရုံမှ မထွက်ခွာမီ ကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာကို တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ယေဘုယျအားဖြင့် သိုလှောင်မှုသေတ္တာနှင့် လက်စွပ်သေတ္တာတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် စက်ရုံမှထွက်ခွာကာ အားသွင်းကိရိယာပေါ်တွင် ထားခြင်းဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်းကို အားသွင်းနိုင်သည်။
ဟိrear-loadingကားကိုင်ဆောင်ထားသည့် ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းကဲ့သို့သော အပိုကိရိယာတစ်ခုကို ထပ်ထည့်ရန်ဖြစ်သည်။တပ်ဆင်မှု အနေအထားသည် ပုံသေမဟုတ်ပေ။လေအေးပေးစက် လေဝင်ပေါက်၊ ကားစင်တာ ကွန်ဆိုးတွင် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး စုပ်ခွက်များအကူအညီဖြင့် လေကာမှန်ပေါ်တွင် စုပ်ယူနိုင်သည်။
ကားရှေ့တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ကြိုးမဲ့အားသွင်းနည်းပညာသည် ကား OEM သို့ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းဖြေရှင်းချက်ပံ့ပိုးပေးသည့် ကြိုးမဲ့အားသွင်းဖြေရှင်းချက်မှ ဆင်းသက်လာသည်။ဒီနည်းပညာကို ဘယ်ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်နဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လဲလို့ မေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖြေပါပဲ။LANTAISIနည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်လမ်းညွှန်ချက်နှင့် သင့်ကားကဲ့သို့ပင် သင့်ကားအတွက် ကြိုးမဲ့ဖုန်းအားသွင်းကိရိယာကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည့်၊CW12.
လိုအပ်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ။ကားရှေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသော ကြိုးမဲ့အားသွင်းနည်းပညာ?
အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကားတွင်တပ်ဆင်ထားသော ကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာအနေဖြင့်၊ ကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် အခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် တင်းကျပ်သော ယာဉ်အဆင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင် အပူချိန် အကွာအဝေး၊ ရေစိုခံ နှင့် ဖုန်မှုန့် စသည်တို့ အတွက် အချို့သော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ပါရှိပါသည်။
၎င်းတွင် မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း၏ E-Mark အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ စက်ရုံစနစ် IATF16949 နှင့် EMC လက်မှတ်ကဲ့သို့သော တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များစွာ ပါဝင်သည်။၎င်းတွင် တင်းကျပ်သော စံချိန်စံညွှန်းများ၊ မြင့်မားသော ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ရှည်လျားသော စက်ဝန်းအချိန်များ ပါဝင်သည်။ဤအကြောင်းပြချက်များသည် ကြိုးမဲ့အားသွင်းထုတ်လုပ်သူများ၏ ရှေ့တန်းတင်ဈေးကွက်ကို အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိစေပါသည်။
အဆိုပါအဘို့rear-loading ကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာ၊ ၎င်းသည် ယာဉ်တစ်ခုလုံး၏ အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သည့်အပြင် ကားစက်ရုံ၏ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စံနှုန်းများနှင့် မကိုက်ညီပါ။ထို့ကြောင့်၊ ကျောဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားသော ကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြိုက်များအတိုင်း တပ်ဆင်မည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဘက်အားသွင်းကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာ အမျိုးအစားများကား အဘယ်နည်း။
ကျောဘက်တွင် တင်ထားသော ကြိုးမဲ့အားသွင်း၏ ပထမဆုံး အမျိုးအစားမှာ သီးသန့်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း ဖြစ်သည်။၎င်းသည် သီးခြားမော်ဒယ်တစ်ခုအတွက် ပြင်ပကုမ္ပဏီထုတ်လုပ်သူမှ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။မူရင်းကားဒေတာကို ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်းဖြင့် ပုံဖော်ထားသည်။၎င်းသည် အမှန်တကယ်တွင် အနောက်တပ်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် အရှေ့တပ်ဆင်မှုနှင့် အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အမြင်အာရုံရရှိစေသည်။
အနောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသောကားကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာ၏ဒုတိယအမျိုးအစားမှာကားကြိုးမဲ့အားသွင်းကွင်းဖြစ်ပြီး ပို၍အသုံးများသည်။စျေးကွက်တွင် ကားကြိုးမဲ့အားသွင်းကွင်း အမျိုးအစား လေးမျိုးရှိသည်- အနီအောက်ရောင်ခြည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကွင်းများ၊ ဆွဲငင်အား ကွင်းများ၊ သံလိုက်ကားကွင်းများ၊ အသံကားကွင်းများ စသည်တို့ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့တွင်၊ အနီအောက်ရောင်ခြည် induction bracket သည် motor နှင့် infrared sensor လိုအပ်ပြီး၊ gravity bracket သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ဆောက်မှု သက်သက်ကို လက်ခံသည်၊ သံလိုက်ကား bracket သည် magnetic attraction ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး voice car bracket ကို App ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိပါသည်။ အသံအကူအဖြစ်။
အကျဥ်းရုံးသည်,ကားကို ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း။ကြိမ်နှုန်းမြင့် ကြိုးမဲ့အားသွင်းအသုံးပြုမှု မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အသုံးပြုရအဆင်ပြေပြီး ဘေးကင်းကာ လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် လက်နှစ်ဖက်လုံးကို လွတ်စေသည်။ကားအတွင်း၌ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ အရှေ့ သို့မဟုတ် အနောက်တွင် တိုးတက်မှုအတွက် နေရာများစွာ ကျန်ရှိသေးသည်။ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း၏ ယေဘုယျလမ်းကြောင်းအောက်တွင်၊ ဤအရေးကြီးသောကြိုးမဲ့အားသွင်းမှုအခြေအနေ၏ အနာဂတ်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့လည်း အကောင်းမြင်ပါသည်။
ကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ။ပိုမိုသိရှိနိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ လိုင်းတစ်ခုပေးလိုက်ပါ။
ကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာများနှင့် အဒက်တာများ စသည်တို့ကဲ့သို့သော ဓာတ်အားလိုင်းများအတွက် ဖြေရှင်းချက်တွင် အထူးပြုပါ။ ------- LANTAISI
တင်ချိန်- ဇွန်လ ၂၂-၂၀၂၂